पाथीभरामाताले हामी सबैको रक्षा गरुन, आजको राशीफल
श्रीसूर्य उत्तरायण,शिशिरर्तुः,विरोधकृत् नाम संवत्सर,शाके १९४०,विक्रमसम्वत २०७५ साल फाल्गुन २८ भौमबार नेपाल सम्बत ११३९ चिल्लाथ्व तदनुसार सन् २०१९ मार्च १२ तारिक शुक्लपक्ष षष्ठी तिथि राती १ वजेर १४ मिनेटसम्म उप्रान्त सप्तमी तिथि, कृतिका नक्षत्र राती १ वजेर ४५ मिनेटसम्म उप्रान्त रोहिणी नक्षत्र,वैधृतियोग,कौलवकरण, आनन्दादियोग गद ,सूर्य कुम्भ राशीमा,चन्द्रमा विहान ७ वजेर ४१ मिनेटसम्म मेष उप्रान्त वृष राशीमा ।
राहुकालः–अशुभ अपरान्ह ३ वजेर ११ मिनेटबाट ४ वजेर ४० मिनेटसम्म रहनेछ । अशुभ यमघण्टायोगः– विहान ९ वजेर १६ मिनेटबाट १० वजेर ४५ मिनेटसम्म रहनेछ । गुली कालः–सामान्य मध्यान्ह १२ वजेर १४ मिनेटबाट अपरान्ह १ वजेर ४३ मिनेटसम्म रहनेछ । दूरमुहूर्तः–अशुभ विहान ८ वजेर ४१ मिनेटबाट ९ वजेर २८ मिनेटसम्म र राती ११ वजेर १ मिनेटबाट ११ वजेर ४८ मिनेटसम्म रहनेछ । शुभ अभिजित मुहूर्तः–पूर्वान्ह ११ वजेर ५० मिनेटबाट मध्यान्ह १२ वजेर ३७ मिनेटसम्म रहनेछ ।
सूर्योदयबाट प्रातः ७ वजेर ४८ मिनेटसम्म रोग वेला,७ वजेर ४८ मिनेटबाट ९ वजेर १७ मिनेटसम्म उद्वेग वेला,९ वजेर १७ मिनेटबाट १० वजेर ४६ मिनेटसम्म चर वेला,१० वजेर ४६ मिनेटबाट १२ वजेर १५ मिनेटसम्म लाभ वेला,१२ वजेर १५ मिनेटबाट १ वजेर ४३ मिनेटसम्म अमृत वेला,१ वजेर ४३ मिनेटबाट ३ वजेर १२ मिनेटसम्म काल वेला,३ वजेर १२ मिनेटबाट ४ वजेर ४१ मिनेटसम्म शुभ वेला र ४ वजेर ४१ मिनेटबाट सूर्यास्तसम्म रोग वेला रहनेछ ।
सूर्यास्तबाट ७ वजेर ४१ मिनेटसम्म काल वेला,७ वजेर ४१ मिनेटबाट ९ वजेर १२ मिनेटसम्म लाभ वेला,९ वजेर १२ मिनेटबाट १० वजेर ४३ मिनेटसम्म उद्वेग वेला,१० वजेर ४३ मिनेटबाट १२ वजेर १५ मिनेटसम्म शुभ वेला,१२ वजेर १५ मिनेटबाट १ वजेर ४६ मिनेटसम्म अमृत वेला,१ वजेर ४६ मिनेटबाट ३ वजेर १७ मिनेटसम्म चर वेला,३ वजेर १७ मिनेटबाट ४ वजेर ४८ मिनेटसम्म रोग र ४ वजेर ४८ मिनेटबाट सूर्योदयसम्म काल वेला रहनेछ ।
मेषः–आर्थिक चलखेल बढि हुनसक्छ सचेत रहनुहोला । असहमतिका बीच काम गर्नु पर्नेछ । प्रयत्न पूर्वक गरेका काममा सफलता मिल्नेछ । कुनै कुरामा पनि हेलचक्र्याई नगर्नु होला । घरका कुरा धेरै गर्नु पर्ला । विश्वास र भरोसमा काम गर्दा धोका हुनेछ । महत्वकाँक्षी योजनामा हात नहाल्नु होला । भाग्यले कम साथ दिनेछ ।
वृषः– समस्या सँग लड्न सक्ने तागत मिल्नेछ । शारीरिक एवं मानसिक स्फूर्ति बढ्नेछ । सभा सम्मेलन तथा भोज भतेरमा सहभागि हुने अवसर मिल्नेछ । भाग्य भन्दा कर्ममा जोड दिनु होला । साना तिना समस्यामा नअल्झि काम गर्नु होला । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी हुनेछ । अध्ययन अध्यापन कार्यमा थोरै प्रगति हुनेछ ।
मिथुनः– समयले साथ दिने छैन । गलत सवित गराउन खोज्दै छन् सर्तक रहनुहोला । दैनिक काममा अवरोध आउने देखिन्छ । समस्याको वोझले थिच्नेछ । खर्च वृद्धि हुदा आर्थिक पक्ष दुर्वल बन्नेछ । व्यापार व्यवसायमा मन्दि आउनेछ । विश्वास घात हुनसक्छ । जोखिम पूर्ण यात्रा नगर्नु होला । सरकारी काममा हेलचक्र्याई नगर्नु होला ।
कर्कटः– बातावरण अनुकुल नै बन्नेछ । सहास,धैर्यता र पराक्रम बढ्नेछ । आकस्मिक आम्दानीको योग देखिन्छ । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन सन्तोषजनक नै हुनेछ । जीवन साथीको सहयोगमा महत्वपूर्ण काम हुनेछन् । हतारमा गरेका कामबाट कम लाभ हुनेछ । धन सम्पतिको वृद्धि हुने योगछ । साझेदारी काममा हात नहाल्नु होला ।
सिंहः–पूर्ण विश्वासमा काम गर्दा खासै फरक पर्ने छैन । काम गर्दा सहजता महशुस हुनेछ । सरल विधिबाट कार्य सम्पादन हुनेछन् । । विशेष गरेर यान्त्रिक तथा औषधी चिकित्सा जस्ता व्यापार,पेशा व्यवसायबाट बढि लाभान्वित हुनुहुनेछ । विरोधी कमजोर हुनेछन् । राजनैतिक क्षेत्रबाट सोचे जस्तो लाभ लिन सकिने छैन ।
कन्याः– समयमा सामान्य सुधार आउनेछ । अरुका काममा व्यस्त हुदा आफ्ना काम ओझेलमा पर्ने छन् । अरुको कल्याणमा आफ्नो भविष्य नदेख्नु होला । रोकिएका काम सुचारु हुनेछन् । फलदायी यात्राको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । साथी भाईबाट सामान्य सहयोग मिल्नेछ । पढाई लेखाईमा थोरै प्रगति हुनेछ । आस्था र विश्वास बढ्नेछ ।
तुलाः– दिन प्रतिकुल देखिन्छ । स्थिति भङ्ग हुनेछ भने बेस्थिति बढ्नेछ । उपलब्धिको यात्रामा तगारो लाग्नेछ । काम गर्दा विभिन्न समस्या झेल्नु पर्नेछ । यत्नपूर्वक गरेका कामले पनि पूर्णता पाउने छैन । आस्था र विश्वास घट्नेछ । मानसिक एवं शारीरिक दुर्वलता बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायमा मन्दि आउनेछ । लगानी बढाउनु गलत हुनेछ ।
वृश्चिकः–हात फुकाएर काम गर्नु होला,हात थाप्नु पर्ने छैन । जीवन साथीको सहयोगमा महत्वपूर्ण काम बन्नेछ । उपलब्धिका मार्गहरु खुल्ने छन् । आयत निर्यात व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । दामपत्य जीवनमा सुखानभूति हुनेछ । राजनैतिक सक्रिय बढ्नेछ । नोकरीमा नयाँ सम्भावना देखिने छन् । पढाई लेखाईमा थोरै चासो बढ्नेछ ।
धनुः– काम गर्दा असहज महशुस हुनेछ । आफ्नो लागि जिम्मेबार कोहि हुने छनै आफै बन्नु होला । काम गर्दा धैर्यता र लगनशिलताको खाचो देखिन्छ । प्रयत्नपूर्वक गरेका काम सफल हुनेछन् । मुद्धा मामिलामा विजय हात लाग्नेछ । लेनदेन कारोवार गर्दा बढि चनाखो रहनु होला । चाडो विश्वास कसैलाई नगर्नु होला ।
मकरः– अलमलमा नपर्नु होला । एकै चोटी चारैतिर हात नहाल्नु होला । एउटा एउटा चिन्ताले छोड्ने छैन । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य आम्दानी हुनेछ । जीवन साथिको सहयोगमा काम गर्दा थोरै सजिलो हुनेछ । विवादित काममा हात नहाल्नु होला । पढाई लेखाईमा थोरै प्रगति हुनेछ । प्रेम प्रस्ताव आउनेछ ।
कुम्भः– पारिवारिक समस्या बढ्ने छन् । घमण्ड नगर्नु होला,चक्रव्यूमा पर्न सकिन्छ सतर्क रहनुहोला । विना योजना विना तयारी केहि नगर्नु होला । लगनशिल भई गरेका कामबाट थोरै लाभ हुनेछ । परभावको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । राजनैतिक मुद्धामा नअल्झिनु होला । व्यापारमा मन्दि आउनेछ ।
मिनः– काम गर्ने वातावरण बन्नेछ । समयको सदुपयोग गर्नु होला । गरेका काम अधिकाँश सफल हुनेछन् । अरुको भरमा होईन आफ्नै बाहुबलबाट काम सम्पादन गर्नुहोला । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । इष्टमित्र,साथि भाईको सहयोग सहानुभूति मिल्नेछ । इज्जत प्रतिष्ठा जोगिने काम हुनेछ । शैक्षिक मार्ग आँशिक सफल देखिन्छ ।
आजको तपाईंहरूको राशिफल हेर्नुहोस् तपाईंहरूको दिन कस्तो रहला -धन्यवाद /वि.सं. २०७६ साल…
मनकामनामाइले हामी सबैको रक्षा गरुन, हेर्नुहोस आजको राशिफल
आज सोमबार तपाईको शुभदिन हुनेछ हेर्नुहोस् राशिफल, २०७६ बैशाख ३० गते सोमबार, २०१९ मे १३…
आज आईतबार तपाईको राशिफल हेर्नुहोस्, वि.स. २०७६ साल बैशाख २९ गते आईतबार, २०१९ मे १२…
आज बैशाख २८ गते शनिबार मे ११ को राशिफल
हेर्नुहोस् सोमबारको राशिफल, वि.स. २०७६ साल बैशाख २३ गते सोमबार २०१९ मे ६ तारिख
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ इजरायलको ७ औ बार्षिकोत्सव तथा...
आफ्नै स्वागत कार्यक्रममा मन्तव्य राख्ने बित्तिकै ढलेका शिक्षकको निधन
७ वर्षीय बालक किरिया बस्दै:चन्दा उठाएर कुनो उम्काउँदै
घाँटी रेटेर हत्या गर्नेलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै विद्यार्थीले थाले...
दुईतिहाई सरकारको दम्बमा एकात्मक राज्य सञ्चाालन- पुर्वराज्य मन्त्री गुरुङ
इजरायलमा उभौली सिली (५०७९)भब्य रुपमा सम्पन्न, इन्दिरा राईको अध्यक्षतामा...
नेवा खल: इजरायल द्वारा पुर्ब अध्यक्ष श्रेष्ठ लाई बिदाई, कार्यक्रम...